Yandex က ဘာဖြစ်လို့ Russia Google လို့ နာမည်ကြီးနေတာလဲ
Amazon လို အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုမျိုး ပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ Yandex
Yandex ဆိုတာ ရှရုားလူမျိုးတွေ အသုံးပြုလျက်ရှိနေတဲ့ Search Engine တစ်ခုပါ။ သူတို့ဆီမှာတော့ Russia’s Google လို့ ခေါ်တာပေါ့။
လေ့လာချက်တွေအရ “Yandex” Search Engine ကို လူဦးရေ သန်း ၅၀ ခန့် ပုံမှန် အသုံးပြုနေတယ်လို့ AITC (Association of Internet Trade Companies) မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၈ နိုင်ငံမှာ ရုံးခန်းတွေ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး နောက်တနည်း ပြောရရင် Multinational Corporation အဖွဲ့စည်းလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Yandex ခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး၊ Information Services ၊ eCommerce ၊ Navigation ၊ Mobile Applications နဲ့ အွန်လိုင်း ကြော်ငြာ ဆိုပြီး များစွာသော ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးထားလို့ပါ။
ဌာနချုပ် Head Office ကိုတော့ နယ်သာလန်မှာ တည်ထားပြီး အဓိကအားဖြင့် ရုရှားတစ်နိုင်ငံထဲအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးတယ် ဆိုပါတယ်။
တာဝန်ယူ ပုဂ္ဂိုလ်အများစုဟာလည်း အမိနိုင်ငံအတွင်းမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်သူတွေ ဖြစ်ကြပြီး Russia နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Search Engine လို နေရာမျိုးမှာ OS ၊ Browser ကိုပဲ အသုံးပြုကြတဲ့အထိ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ မြင့်မားသလို Russia Google လို့တောင် အမည်တွင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း Yandex Browser သုံးလို့ရပါတယ်။
အများစုက Google ၊ Bing လောက်ပဲ Primary သုံးဖြစ်ကြတဲ့အတွက် Yandex ဘယ်လောက် Powerful ဖြစ်နေမှန်း သတိမထားမိတာပါ။
Yandex OS နဲ့ Browser စတင် မိတ်ဆက်တဲ့ 2019 ရာသီမှာ သုံးလို့ မတရားကောင်းခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိချိန်မှာတော့ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေပါပြီ။
ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက် Google တမင် မရှာပေးတဲ့ ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယိုတွေရဲ့ Source အပြင် နာမည်၊ နာမ၊ လိပ်စာတွေပါ အတိကျ မွေလို့ရတာပါ။
တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းတာနဲ့ စစ်တမ်း ကောက်ယူလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ Google ၊ Baidu ၊ Bing နဲ့ Yahoo! တို့နောက် လိုက်နေတဲ့ ပဥ္စမမြောက် Browser အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ နံပတ် (၁) ဖြစ်နေပြီး စျေးကွက်ရှယ်ယာ ၅၂% ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်
ဒါနဲ့ သွေးနီတပ်ကြီး ခုလို ဖြစ်လာတာ ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ?
Zero Level က စမှန်း သိပေမယ့် Business Insider က သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Interview ကို ဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Start with MS-DOS
ကျွန်တော်တို့တတွေ Browser စလုပ်နိုင်ခင် အချိန်တုန်းက IBM နဲ့ Microsoft တို့အတွက် မူပိုင်ခွင့်တွေ အမျိုးစားခွဲခြားတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ MS-DOS Software အတွက် ကူညီပေးတာပေါ့။
ဘယ်လို ကူညီပေးလဲဆိုရင် Russian ဘာသာစကားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Morphology ကို Full-text Search အနေနဲ့ သုံးနိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးတာပါ။
ဒါကို လုပ်ကိုင်တုန်းက 1990 ဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါသေးတယ်၊ နောက် ၃ နှစ် လောက်ကြာမှ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူ Search Software တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ ကျောင်းတက်နေရင်းနဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့ဖြစ်တယ်။
အဲ့တုန်းက ဘာနာမည်ပေးရမှန်း မသိတိုင်ပတ်နေခဲ့တာလို့….ရယ်ကာ မောကာ ပြောရင်း
Yandex ဆိုရင် ကောင်းမလား? သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူကလည်း မဆိုးပေဘူးပေါ့ဆိုပြီး ဒီနာမည်နဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့တွေ စလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီနာမည်ကို အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်ရင် Yet Another iNDEXer လို့ အဖြေ ထွက်မှာပါ။ နားလည်အောင် ပြောရရင် အင်္ဂလိပ်လို “I” ကို ရုရှားမှာ “Я” Ya လို့ ထွက်ပါတယ်။
ပေါင်းလိုက်ရင် Яndex ဖြစ်ပေမယ့် ဒီစကားလုံးဟာ Pun (ညီမျှခြင်း) သဘောဆောင်လို့ တခြားစကားလုံး အဓိပ္ပာယ်တွေ မြုပ်ထားတာပါ။
ဥပမာ တရုတ်တွေရဲ့ ညီမျှခြင်း Yin & Yang လို ကျွန်တော်တို့ နာမည်ဟာလည်း Yindex သို့ Yandex လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ Browser ကို စတင်နိုင်ခဲ့ပြီး 1993 – 96 ကာလတွေမှာ Search နဲ့ ဆိုင်တဲ့ နည်းပညာ ၊ Software တွေနောက်ပဲ လိုက်နေခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
1997 စက်တင်ဘာ 23 လောက်မှ Yandex.ru ဆိုတဲ့ Search Engine ကို မော်စကိုမြို့ရဲ့ ကျောင်းပြပွဲ အခမ်းနားတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောဖို့ ကျန်သွားတာ ၁ ချက် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Browser ဘယ်လို ဖြစ်လာလဲ ပြောနေပေမယ့် ဖန်တီးခဲ့သူကို Mention လုပ်ဖို့ မေ့သွားတာပါ။
Yandex နာမည်ပေးဖို့ တိုင်ပင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်က Arkady Volozh နဲ့ Ilya Segalovich တို့ပါ။
Browser ကို Launch လုပ်ပြီးတဲ့ အစပိုင်းမှာ Comptek ကပဲ 2000 လောက်ထိ Development ပိုင်းအတွက် တာဝန်ယူခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း Arkaday Volozh က Standalone ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာအောင် ခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့သလို သီးသန့်ဖြစ်လာတဲ့ 2001 ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ အွန်လိုင်း ကြော်ငြာလုပ်ဖို့ Yandex.Direct ကွန်ရက်ကို စတင်ခဲ့တာပါ။
အဲ့လုပ်ငန်းကပဲ အကျိုးပေးတယ် ဆိုရမလား ၄ နှစ်အတွင်းမှာ $17 သန်းလောက် အမြတ်ကျန်ခဲ့တယ်၊ အဲ့ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အသားတင်ဝင်ငွေက $7 သန်း ရှိနေပါပြီ။ 2006 ရောက်တော့ တပတ်ဝင်ငွေ $1 သန်း ကျော်သွားလို့ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
2007 မှာ ယူကရိန်း Office ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့ နိုင်ငံသားတွေ သုံးစွဲဖို့ Customized လုပ်ထားတဲ့ Search Engine မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကြားထဲ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ Social Networking Services တွေ Road Traffic Monitoring Agency တို့ကို ဝယ်ပစ်ခဲ့ပြီး Yandex Map Services နဲ့ ပေါင်းဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
2008 လောက်မှာ Yandex Labs ကို ဆီလီကွန် တောင်ကြားမှာ ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပြီး Search နဲ့ ကြော်ငြာအပိုင်းမှာ အသုံးပြုမယ့် နည်းပညာဖန်တီးဖို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။
2009 မှာတော့ Mozilla က ရုရှားနိုင်ငံအတွက် Google Search Engine ကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး Yandex ကို Default Search Provider အနေနဲ့ Firefox Browser မှာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒိနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ Music Service ကို ပြန်ရွှိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာ. အရင်က အပုဒ်ရေ ၆ သောင်းလောက်ပဲ ရှိတာကနေ ၈ သိန်းကျော်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တယ်။
2010 မှာ Face.com အတွက် $4.3 သန်း ရင်းနှီးခဲ့ပေမယ့် 2012 လောက်မှာ Facebook ဝယ်သွားတယ်၊ ဆက်လည်း မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ Business Directory ပုံစံမျိုး လုပ်ငန်းသေးတွေအတွက် ကြော်ငြာပေးတာမျိုး လုပ်ခဲ့တယ်..ဒါမယ့် အဲ့လို လုပ်တာထက် ပိုကောင်းတဲ့ အစီစဥ်တစ်ခုကို စဥ်းစားမိသေးလို့ Yandex.Startup ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒိနောက်ပိုင်း အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပဲ လည်ပတ်ရင်း အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ နည်းပညာလှိုင်းလုံး ရိုက်ခတ်တဲ့ ဒဏ်ကိုလည်း ခံရ…
အဲ့တွက် နောက်မကျန်ခဲ့ရအောင် Food Delivery Service ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ Autonomous Cars နဲ့ Uber နဲ့ ပေါင်းပြီး Taxi လုပ်ငန်း စသဖြင့် ဆက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာလည်း Smartphone ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
(စာဖတ်သူ ငြီးငွေ့သွားမစိုးလို့ နှစ်အလိုက် ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အချက်တွေနဲ့ အသေးစား ပြင်ဆင်မှုတွေ မဖော်ပြတော့ပါဘူး)
Intends to become Amazon Russia
လက်ရှိအချိန်မှာ Russia နိုင်ငံအတွင်း အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေး စတင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ ဒါမယ့် အခက်ခဲတွေ အများကြီးရှိနေတဲ့အပြင် Amazon ၊ eBay တို့လည်း ရှိနေတဲ့အတွက်
“ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ အသုံးဆောင်တွေ၊ TV နဲ့ Smart Speaker စတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးသုံး ပစ္စည်းတွေ၊ ကစားစရာ အရုပ်တွေ သာမက AI Digital Assistant Alice စတာတွေကို အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကနေ တစ်ဆင့် ရရှိနိုင်အောင် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်တော့မှာပါ” လို့ အမှုဆောင်အရာရှိ Micheal Levin က ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“လက်ရှိအချိန် Russia မှာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Mailru နဲ့ Vkontakte တို့ရှိပါတယ်။ နှစ် ၄၀ ကာလလုံးလုံး အင်တာနက် လုပ်ငန်းသာ လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင် ပိုပြီးထင်သာမြင်သာ ရှိလာပါပြီ။
အရင်တုန်းက Taxi ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ပေးခဲ့သလို Yandex Market ဆိုပြီး Warehouse တွေမှာ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တာပါ” လို့ မူလ အရှိန်အဝါနဲ့ အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးစတင်ဖို့ တာဆူနေကြောင်း နှုတ်ဟခဲ့ပါတယ်။
Yandex ရဲ့ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပြည်တွင်းဘဏ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Sberbank က ပံ့ပိုးကူညီသွားမှာဖြစ်ပြီး Beta Testing စတင်နေပါပြီ။
အဲ့ဒါအပြင် Nizhny ၊ Novgorod Kazan နဲ့ Ufa မြို့တွေမှာ Pilot Project လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်သလို အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို စတင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားရပါတယ်။
အခုလို အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေး ခြေလှမ်းစတင်မယ့် Yandex အနေနဲ့ စွန့်စားရမယ့်အချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးခဲ့စဥ်က တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေ ရရှိခဲ့တဲ့နှုန်းအပေါ် အခြေခံမှာဖြစ်လို့ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမှုများနေပါတယ်။
Image: The Jakarat Post
ဒါ့အပြင် စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Mitch Mitchell က Russia ရဲ့ အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးဟာ UK နဲ့ US တို့နဲ့စာရင် တွင်ကျယ်မှုမရှိသေးပါဘူး။
အဓိကပြဿနာဟာ Logistics နဲ့ Supply Chain တို့လို ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွေမှာ ငွေကိုတစ်ခါတည်း ပေးချေတဲ့ စနစ်သာ ပဓာနကျနေတာပါ။
ဒါကို Mitchell က “ကိုယ်မှာလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီး ကြိုက်တယ်ဆိုရင် Delivery ကို ကျသင့်ငွေပေးမယ်၊ အကယ်၍ မကြိုက်လို့ဆိုရင်တော့ ခေါင်းခဲရမလား” ဆိုပြီး ရှရုားနိုင်ငံရဲ့ ငွေပေးချေစနစ် သဘောသဘာဝကို ထောက်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Russia မှာ အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှု ပေးစွမ်းနေတဲ့ Amazon လို ကုမ္ပဏီမျိုးမရှိတာ စဥ်းစားရမှာပါ။ အကယ်လို့များ ရှရုားတစ်နိုင်ငံထဲ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုရင်တောင် ယူရို ၁၅ ဘီလီယံလောက် ကုန်ကျနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ AITC ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဒီပမာဏကို အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်နဲ့ နှိုင်းယှဥ်ထားတာဖြစ်ပြီး UK မှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးချင်တယ်ဆိုရင် ယူရို ၉၃.၈၂ ဘီလီယံလောက် သုံးစွဲရမှာပါ။
ဒီအချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း Levin က “ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံထဲ Amazon လို ဝန်ဆောင်မှုမျိုးနဲ့ မယှဥ်ပါဘူး၊ အဓိက လက်လီရောင်းချနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Machine Learning နဲ့ Data Science ကို အခြေခံထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးနဲ့ပဲ ယှဥ်ပြိုင်သွားမှာပါ” လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ Russia မှာ Amazon လို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Ozone နဲ့ AliExpress တို့ရှိပေမယ့် စျေးပေါပေါ တရုတ်ပစ္စည်းတွေကို နယ်စပ်ကနေ စျေးသက်သက်သာသာ တင်သွင်းနေတာဖြစ်လို့ ဒီ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုမျိုးဟာ အကျုံးမဝင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကို Levin က “ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အယုံအကြည်ရဖို့ “Yandex” Brand နာမည်အရှိန်အဝါနဲ့ ကြိုးစားသွားမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည့်ဝပြီး ယုံကြည်လို့ရတဲ့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုဟာ တိုင်းသိပြည်သိဖြစ်သလို ရှရုားပြည်သူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထမင်းရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်” လို့ ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့ အားတက်သရော ပြောဆိုခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
အခုလို Russia နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် ဖော်ပြထားချက်ကို Mitchell က သဘောတူလက်ခံခဲ့ပြီး
“လူတွေလိုအပ်မယ့် ပစ္စည်းတွေ အဆင်သင့်ထောက်ပံ့နိုင်မလား၊ အကယ်၍ ပစ္စည်းရှိတယ်ထားပါဦး လျှင်လျှင်မြန်မြန် ပို့ပေးနိင်မလား ဆိုတဲ့အချက်တွေအပြင်….
ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလို့ တန်ရာတန်ကြေးနဲ့ အလျော်အစားလုပ်ရင် ဝယ်ယူသူက ပိုက်ဆံပြန်ရနိုင်မလား” ဆိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသရွေ့ အောင်မြင်မှာပါလို့ သုံးသပ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Source: Company Financial Release ၊Company Mission ၊ Top Sites in Russia ၊ History of Yandex ၊ Ukarine Search ၊ Business Insider
Snapdragon 768G Processor ကို Qualcomm ကြေညာလိုက်ပြီ
Samsung ရဲ့ 150MP Sensor က Huawei ရဲ့ Challenger ဖြစ်လာမလား?